Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elinamagumbi okulala amabini - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elinamagumbi okulala amabini
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAnja
Ngaphezu kweenkonzo, ukubuka iindwendwe ngentliziyo kunye nesithethe!
Ikwindawo enamahlathi nangaphandle kwePrüm.
Ezemidlalo uze uphumle
ngoxa unyuka intaba, uhamba ngebhayisekile okanye kwenye yeendawo zokugcina abantu abathandanayo kule ndawo.
Zive ngathi uphumle ekumasajweni kwigumbi lakho lasehotele, ukhenketho lweentyatyambo kunye neWitch Griselda okanye ukhenketho lokubethwa ngumoya kwiminyaka yekofu yasendle ye-Eifel. Ihotele yethu yasemaphandleni isoloko iyindawo efanelekileyo onokukhetha kuyo.
Siza kukwamkela ngokwakho ngamaxesha okubhalisa xa ufika.
Igumbi elikhulu losapho linamagumbi okulala amabini ahlukeneyo anento yonke, omabini amagumbi okulala anebhedi elala abantu ababini, idesika kunye neTV enkulu esesikrinini.
Kwigumbi lokulala elikhulu, kukho nesofa etofotofo (njengebhedi yesi-5 ukuba uyathanda), isitulo esinendawo yokungqiyama netafile.
Oku kuquka ityeya esemazantsi, enetafile nezitulo.
INGQALELO: ayikho ikhitshi.
Amagumbi akho acocwa yonke imihla.
Kwivenkile yethu yokutyela unokutya ukusuka ngo-18° ukuya ngo-21 °.
Iintsuku eziyi-7 e Prüm
Wamkelekile kwiLandhotel am
Wenzelbach Ezemidlalo uze uphumle
e-Eifel... xa uhamba ngeenyawo, uhamba ngebhayisekile, ukujima kunye nemidlalo yezempilo kunye nomnye wamaqabane ethu (imizuzu eyi-4 xa uqhuba, uhamba ngemizuzu eyi-4 ngezavenge iindwendwe zasehotele) okanye kwenye yeendawo zokugcina abantu abathandanayo kule ndawo.
Abakhweli beentaba baza kufumana igaraji ekhuselekileyo kunye nabahlobo babo abanezilwanyana zasekhaya kunye nabakhweli beebhayisekile. Kwiindwendwe ezineemoto zombane sinezikhululo eziyi-3 zokutshaja, ezimbini kwiimodeli zeTesla kunye nenye yeemoto zombane
Sisoloko sikhona xa sinemibuzo namacebiso ngexesha esivula ngalo.
Ukususela ngo-8 kusasa ukuya ngo-9 ebusuku
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prüm